Rugby vehivavy- Afrika :: Tafita hiatrika ny lalao sakana amin’ny Lalao Olympika ny Makis • AoRaha
Rugby vehivavy- Afrika Tafita hiatrika ny lalao sakana amin’ny Lalao Olympika ny Makis
Vokatra tsara. Hiverina hikatsaka ny tapakila amin’ny Lalao Olympika 2020 indray ny Makis vehivavy. Mbola tsy nahazo izany tapakila izany aloha ny ekipam-pirenena amin’ny taranja baolina lava­lava lalaovin’olona fito, omaly nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, tany Tonizia.
Nanakoako tao amin’ny kianjan’i Moustapha Ben Jannet, tao Monastir, Tonizia, ny fandresena dimy sy faha­resena tokana azon’i Madagasikara tamin’ity hetsika ity.
Laharana fahatelo no vokatra azon’ny Makis vehivavy tamin’iny fandraisana anjara voalohany tamin’ny fifaninanana iny. Baolina nentin-tanana tokana no nahatafavoaka ny Makis ho mpandresy fanindroany nanoloana an’i Tonizia nandritra ny fiadiana ny laharana fahatelo (5 noho 0). Hiverina amin’ny fiatrehana ireo lalao sakana mba hahazoana ny tapakila amin’ny Lalao Olympika indray izany izy ireo sy ireo mpilalao toni­zi­anina, amin’ny taona ho avy.
Tsara fanombohana anefa ny Makis vehivavy, tamin’ity lalao ity. Fandresena intelo nisesy no azon’izy ireo nandritra ny lalaom-bondrona. Voalohany tao amin’ ny vondrona C ireo mpilalao malagasy rehefa avy nandavo an’i Maraoka (34-0) sy Maorisy (41-0) ary Tonizia (14-7). Teo amin’ny ampahefa-dalana dia lavontsika tamin’ny alalan’ny isa 24 noho 5 i Sénégal ka nahatonga antsika ho isan’ireo firenena efatra voalohany aty Afrika tamin’ity fifaninanana ity. Noravan’i Afrika Atsimo anefa ny nofinofintsika
hiatrika ny lalao famaranana ka resin’izy ireo tamin’ny isa 29 noho 0 ny Malagasy tamin’ny lalao manasa-dalana.Tamin’ny isa 19 noho 0 kosa no nanilihan’i Kenya an’i Tonizia, mpampiantrano.
Handray anjara amin’ny Lalao Olympika manomboka amin’ny 24 jolay ka hatra­min’ny 9 aogositra 2020 any Japana, araka izany ny Afrikana Tatsimo, tompondaka eto Afrika 2019 sy i Kenya. Nisaraka tamin’ny isa 15 noho 14 ny roa tonta teo amin’ny famaranana ka nampandresy an’i Afrika Atsimo. Hiatrika ny fikatsahana ny tapakila amin’ny lalao maneran-tany ihany koa ireo ekipa ireo.
Fampisehoana tetsy Mahamasina :: Vitan’i Dadju ny nameno hipoka ny lapan’ny Kolontsaina
Aretina tsy mamela mahazo :: Misedra aretin’ny voa sy afero sahady ity zaza vao efa-bolana